प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, कस्काे सम्पत्ति कति ? « Deshko News
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, कस्काे सम्पत्ति कति ?
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज २०७३ साल साउन २० गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
कस्काे सम्पति कति ? यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहाेस्